How to get help with rent, what to do if you get an eviction notice, and information about eviction protections - Burmese | Multnomah County
How to get help with rent, what to do if you get an eviction notice, and information about eviction protections - Burmese
3/22/2022 တွင် အပ်ဒိတ် လုပ်ထားသည်
အိမ်မှမောင်းနှင်ထုတ်သည့် အသိပေးစာတစ်စောင် ရရှိလျှင် လုပ်ဆောင်ရန်
ဥပဒေဆိုင်ရာ အကူအညီ ရှာရမည့်နေရာ
မိုလ်တ်နိုးမားကောင်တီတွင် အိမ်လခထောက်ပံ့ကြေးရရန် အကျုံးဝင်မှု
အိမ်မှမောင်းနှင်ထုတ်ခံရမှုမှ အကာအကွယ်များအကြောင်း အချက်အလက်များ
အိမ်မှမောင်းနှင်ထုတ်မခံရအောင် အကာအကွယ်များအတွက် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ပြည့်မီပုံ
211info- သင် သို့မဟုတ် သင့်အိမ်ထောင်စုသည် အိမ်လခမပေးသည့်အတွက် အိမ်မှ မောင်းနှင်ထုတ်ခြင်း အသိပေးစာတစ်စောင် ရရှိပါက 2-1-1 ကို ချက်ချင်း ဖုန်းဆက်လျှင် အိမ်မှမောင်းထုတ်ခံရခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် အထောက်အကူပြုနိုင်သော အလျင်အမြန် ငွေပေးချေသည့် အိမ်လခ ထောက်ပံ့ကြေးအကြောင်းကို သင်သိရှိရပါမည်။ ဤကောင်တီ၏ အိမ်မှမောင်းနှင်ထုတ်ခြင်း ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သည် မိုလ်တ်နိုးမားကောင်းတီရှိ အိမ်ငှားနေထိုင်သူများအား ၎င်းတို့အိမ်တွင် နေထိုင်ဖို့ အကူအညီပေးရန် လျင်မြန်သည့် ငွေရေးကြေးရေး အထောက်အကူနှင့် ဥပဒေရေးရာ အရင်းအမြစ်များကို ပေးကောင်းပေးနိုင်ပါမည်။ သင်သည် ဤပြည်နယ်၏ အွန်လိုင်းမှ ၀င်ရောက်သည့် နေရာ သို့မဟုတ် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်း အဖွဲ့အစည်းမှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားပြီးသော်လည်း ဖုန်းဆက်ပါ။
အိမ်မှမောင်းနှင်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များအကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန် (အော်ရီခွန် ဥပဒေ ဗဟိုဌာန) Oregon Law Center မှ ဤအချက်အလက်စာရွက်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ဥပဒေဆိုင်ရာ အကြံပြုချက် လိုအပ်သည့် အိမ်ငှားနေထိုင်သူများသည်(အော်ရီဂွန် ဥပဒေစင်တာ) Oregon Law Center၊ (အိမ်ငှားသူများ၏ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့) Community Alliance of Tenants သို့မဟုတ် (အော်ရီဂွန်ပြည်နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူ ၀န်ဆောင်မှုများဌာန) Legal Aid Services of Oregon ကဲ့သို့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်း အရင်းအမြစ်များထံမှ အကူအညီ ရယူနိုင်ပါသည်။
သင်သည်မိုလ်တ်နိုးမားကောင်တီသား တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကပ်ရောဂါကြောင့်(လက်ရှိနှင့်ပေးရန်ရက်လွန်နေသည့်) အိမ်လခပေးရန်ရုန်းကန်နေပါက ထောက်ပံ့ကြေးရရန်အကျုံးဝင်ကောင်း ၀င်နိုင်ပါသည်။ အကျုံးဝင်ရန်အတွက်သင်သည်အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်အားလုံးနှင့်ပြည့်မီရပါမည်-
1. သင်သည်အော်ရီဂွန်တွင်အိမ်ငှားရမ်းနေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အိမ်လခပေးရန်
2. သင်၏အိမ်ထောင်စုဝင်တစ်ဦးနှင့်အထက်သည်၎င်းတို့၏ အိမ်လခ သို့မဟုတ်ရေဖိုးမီးဖိုး ပေးနိုင်စွမ်းအပေါ် COVID-19 ကပ်ရောဂါမှတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ထိခိုက်ကြောင်း ပြသနိုင်သည်။
3. သင့်အိမ်ထောင်စု၏ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေသည်သင့်အိမ်ထောင်စုအရွယ်အစားအတွက်ထိုအရပ်ဒေသ၏ ပျမ်းမျှဝင်ငွေ သို့မဟုတ်၎င်းအောက်၈၀% ရှိသည်။ သင်၏၀င်ငွေအကျုံးဝင်မှုကိုစိစစ်ရန် အောက်ပါဇယားကိုအသုံးပြုပါ။
အရပ်ဒေသပျမ်းမျှဝင်ငွေ၏ ၈၀% (AMI)
အိမ်ငှားခထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ပြီးသူများသည် အိမ်ရှင်များအား လျှောက်လွှာတင်ထားကြောင်း အထောက်အထားပေးပါကအော်ရီဂွန် အထက်လွှတ်တော် ဥပဒေမူကြမ်း ၈၉၁ အရ အိမ်လခမပေးသည့်အတွက် အိမ်မှမောင်းနှင်ထုတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ထားပါသည်။
အော်ရီဂွန် ပြည်နယ်၏ အရေးပေါ် အိမ်ငှားရမ်းခြင်း အကူအညီ အစီအစဉ်သည် မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့၊ တနင်္လာနေ့တွင် လျှောက်လွှာအသစ်များ လက်မခံတော့ပါ။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ မတိုင်မီ အိမ်လခ ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ပြီး အိမ်ရှင်များအား အထောက်အထားပေးသည့် အော်ရီဂွန်ရှိ အိမ်ငှားနေသူများကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ၊ ၎င်းတို့၏လျှောက်လွှာ ကိုင်တွယ်ပြီးသည်အထိ ဤ “ဘေးကင်းသည့် ခိုအောင်းရာ” အကာအကွယ်ဖြင့် ကာကွယ်ထားပါသည်။ ဤအကာအကွယ်သည် အိမ်ရှင်များအား အထောက်အထား တင်သွင်းပြီးသူများနှင့် ထောက်ပံ့ကြေး စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် ယခင်အကာအကွယ်များ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အိမ်ငှားနေသူများနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။
အိမ်ငှားရမ်းနေထိုင်သူများသည် ၎င်းတို့နှင့်အတူလုပ်ကိုင်နေသည့် အိမ်ငှားခ အထောက်အကူပေးသူထံမှ သက်ဆိုင်သည့် အထောက်အထားကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
သင်၏လျှောက်လွှာအကြောင်း အထောက်အထားကို မည်သည့်အခါ၌ မည်သို့တင်သွင်းရကြောင်း နောက်ထပ်မေးခွန်းများ ရှိပါက သင့်အား အိမ်ငှားခ ထောက်ပံ့ကြေးပေးသူ သို့မဟုတ် (အော်ရီဂွန် ဥပဒေစင်တာ) Oregon Law Center၊ (အိမ်ငှားသူများ၏ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့) Community Alliance of Tenants သို့မဟုတ် (အော်ရီဂွန်ပြည်နယ် ဥပဒေရေးရာ အထောက်အကူ ၀န်ဆောင်မှုများဌာန) Legal Aid Services of Oregonကို ဆက်သွယ်ပါ။
သင်၏သီးခြားအခြေအနေများအပေါ်မူတည်၍ အိမ်ငှားနေသူများအတွက် အခြားအကာအကွယ်များလည်း ရနိုင်ကြောင်းကိုလည်း သိရှိထားပါ။
အိမ်ငှားရမ်းနေထိုင်သူများသည် ၎င်းတို့နှင့်အတူ လုပ်ကိုင်နေသည့် အိမ်ငှားခ အထောက်အကူပေးသူထံမှ သင့်တော်သည့် အထောက်အထား ရရှိနိုင်ပါသည်။ အိမ်မှမောင်းနှင်ထုတ်မခံရအောင် အကာအကွယ်ပေးထားမှုများ သက်ရောက်မှုရှိစေရန် အိမ်ရှင်အား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မ တိုင်မီ ထိုအထောက်အထား ပေးရပါမည်။